ဘာစီလိုနာ နဲ့ ချန်​ပီယံလိဂ်​ ဆီမီးဖိုင်​နယ်​မှာ နာမည်​​ကျော်​ ​ထောင့်​ကန်​​ဘော ​နောက်​ကွယ်​က အမှတ်​တရားကို ​ပြောပြလိုက်​တဲ့ အလက်​ဇန်းဒါးအာနိုး - SPORTS MYANMAR
ဘာစီလိုနာ နဲ့ ချန်​ပီယံလိဂ်​ ဆီမီးဖိုင်​နယ်​မှာ နာမည်​​ကျော်​ ​ထောင့်​ကန်​​ဘော ​နောက်​ကွယ်​က အမှတ်​တရားကို ​ပြောပြလိုက်​တဲ့ အလက်​ဇန်းဒါးအာနိုး
ထရန်​အလက်​ဇန်းဒါး အာနိုးက သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ချန်​ပီယံလိဂ်​ ဆီမီးဖိုင်​နယ်​ ဒုတိယအ​ကျော့ ဘာစီလိုနာ နဲ့ ပွဲစဉ်​မှာ နည်းပြ ယာဂန်​က​လော့ရဲ့ အမျက်​​ဒေါသ နဲ့ ရင်​ဆိုင်​ ရမယ့်​ အ​ရေးကို စွန့်​စားပြီး လီ​ဗာပူးကို ​နောက်​တဆင့်​ တက်​​ရောက်​ ​စေမယ့်​ ​ထောင့်​ကန်​​ဘောကို ကန်​တင်​ ခဲ့တာ ဖြစ်​တယ်​လို့ ထုတ်​​ဖော်​ သွားခဲ့ပါတယ်​။ လီ​ဗာပူး ဟာ ပထမအ​ကျော့က နူးကမ့်​မှာ ဘာစီလိုနာ အသင်းကို ၃ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးနိမ့်​ ခဲ့​ပေမယ့်​လည်း အန်​ဖီးမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်​ပီယံလိဂ်​ ဆီမီးဖိုင်​နယ်​ ဒုတိယအ​ကျော့ ပွဲစဉ်​မှာ​တော့ ချန်​ပီယံလိဂ်​ သမိုင်းတစ်​​လျှောက်​ အ​ကောင်းဆုံး Come back တစ်​ခုကို ပုံ​ဖော်​ နိုင်​ခဲ့ကာ ဘာစီလိုနာ အသင်းကို ၄ ဂိုးပြတ်​နဲ့ ပြန်​လည်​ အနိုင်​ယူကာ ​ဗိုလ်​လုပွဲကို တက်​​ရောက်​ ခဲ့ပါတယ်​။
လီ​ဗာပူးဟာ မက်​ဒရစ်​မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ချန်​ပီယံလိဂ်​ ဖိုင်​နယ်​မှာ ​တော့တင်​ဟမ်​ကို ၂-၀ နဲ့ အနိုင်​ယူကာ ၆ ကြိမ်​​မြောက်​ ဥ​ရောပ ချန်​ပီယံ ဖြစ်​ခဲ့ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ အလက်​ဇန်းဒါးအာနိုး ရဲ့ ဖြတ်​ထိုးဥာဏ်​နဲ့ ​ပေးပို့ခဲ့တဲ့ ​ထောင့်ကန်​​ဘော က​နေ တိုက်​စစ်​မှုး ​ဒီ​​ဗို​အိုရီဂီရဲ့ အဆုံးသတ်​ ခဲ့မှုဟာ ချန်​ပီယံလိဂ်​ ဆီမီးဖိုင်​နယ်​ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်​ ဂိုး ဖြစ်​ခဲ့တဲ့ အပြင်​ လီ​ဗာပူးရဲ့ ချန်​ပီယံ ခရီးလမ်းမှာ အဓိက အ​ရေးပါတဲ့ အခိုက်​အတန့်​ဖြစ်​ခဲ့ပါတယ်​။
လီ​ဗာပူး တို့ ဘာစီလိုနာ ကို အန်​ဖီးမှာ ၃-၀ နဲ့ ဦး​ဆောင်​ ​နေချိန်​မှာ ​ထောင့်​ကန်​​ဘော ရရှိ ခဲ့ပြီး လီ​ဗာပူး ညာ​နောက်​ခံလူဟာ အဆိုပါ ​ထောင့်​ကန်​​ဘောကို ဇာဒန်​ရှကီရီ ကို ​ပေးကန်​ဖို့ အတွက်​ ​နောက်​ကို ပြန်​​လျှောက်​လာဖို့ ပြင်​ဆင်​ ခဲ့ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဘာစီလိုနာ ခံစစ်​​ကြောင်း သတိလက်​လွှတ်​ ဖြစ်​​နေမှုကို သတိပြု မိသွား ခဲ့တဲ့ အလက်​ဇန်းဒါးအာနိုး ဟာ ​ထောင့်​ကန်​​ဘော ကို လျှင်​လျှင်​မြန်​မြန်​ ကန်​ပို့ ခဲ့ပါတယ်​။
လူကပ်​ ကစားထားခြင်း မခံရတဲ့ အိုရီဂီ ဟာ အဆိုပါ ​ပေးပို့မှုကို အ​ကောင်းဆုံး အဆုံးသတ်​ကာ လီ​ဗာပူး အတွက်​ ​လေးဂိုး​မြောက်​ သွင်းဂိုးကို ရယူ ​ပေးခဲ့ပြီး လီ​ဗာပူး ကို ​ဗိုလ်​လုပွဲ ၂ ရာသီဆက်​ တက်​​ရောက်​ ​စေခဲ့ပါတယ်​။ လက်​ရှိမှာ​တော့ အင်္ဂလန်​ ညာ​နောက်​ခံလူ အလက်​ဇန်းဒါးအာနိုး က သူ့ရဲ့ ​ထောင့်​ကန်​​ဘောဟာ အသင်းရဲ့ ​လေ့ကျင့်​​ရေး ကွင်းမှာ သီးသန့်​ ​လေ့ကျင့်​ထားတာ မဟုတ်​ဘဲ အခိုက်​အတန့်​တစ်​ခု အ​ပေါ် ဥာဏ်​ကွန့်​မြူး သွားခဲ့တာ ဖြစ်​တယ်​လို့ ဆိုသွား ပါတယ်​။
ဒါ​ပေမယ့်​ အလက်​ဇန်းဒါးအာနိုး က ဒီ ​ထောင့်​ကန်​​ဘော သာ အလုပ်​ မဖြစ်​ ခဲ့ဘူးဆိုရင်​ နည်းပြ ယာဂန်​က​လော့ရဲ့ ​ဒေါသတကြီး ​ပြောဆိုမှုကို ခံရမှာ ဖြစ်​တယ်​လို့ ဝန်​ခံ သွားပါတယ်။
လီ​ဗာပူး ညာ​နောက်​ခံလူ က “ကျွန်​​တော့်​တို့ ဒါကို ​လေ့ကျင့်​​ရေးကွင်းမှာ ​လေ့ကျင့်​မှု လုပ်​ထားတာ မဟုတ်​ပါဘူး။ ဒါဟာ အလိုအ​လျောက်​ တုန့်​ပြန်​မှု ဖြစ်​ပြီး ကျွန်​​တော်​ အခွင့်​အ​ရေးကို ​တွေ့လိုက်​ ချိန်​မှာ အသုံးချ ခဲ့ရုံ ပါပဲ။ လူ​တွေ ​နောက်​ပြန်​လှည့်​ သွားတာကို ကျွန်​​တော်​ မြင်​​တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်​။ ဂိုးသမား ကလည်း တစ်​စုံတစ်​ဦး ကို ညွှန်​ကြားချက်​​တွေ ​ပေး​နေ တာကို ကျွန်​​တော်​ မြင်​​တွေ့ ခဲ့ပါတယ်​။ ပြီး​တော့ ဘာစီလိုနာ ကစားသမား တစ်​ဦးမှ ​ဘောလုံးဘက်​ကို ကြည့်​​နေတာ ကျွန်​​တော်​ မ​တွေ့ ခဲ့ပါဘူး။
ဒီ​ဗို့အိုရီဂီ ကို ကျွန်​​တော်​ အလယ်​မှာ ​​တွေခဲ့ ပါတယ်​။ သူတို့ရဲ့ ပင်​နယ်​တီ ဧရိယာ အလယ်​ထဲမှာ အကျီနီ ဝတ်​ထားတဲ့သူ တစ်​ဦးကို ကျွန်​​တော်​ မြင်​ခဲ့ပြီး ဘာ့​ကြောင့်​ မဖြစ်​ နိုင်​ရ မှာလဲ? ဆိုပြီး ကျွန်​​တော်​ ​တွေးခဲ့ ပါတယ်​ ။ အကယ်​၍ ဒီ​ထောင့်​ကန်​​ဘောသာ အလုပ်​ မဖြစ်​ ခဲ့ဘူး ဆိုရင်​ ကျွန်​​တော့်​ အ​နေနဲ့ ပွဲအပြီးမှာ ယာဂန်​က​လော့ ​အော်​တာကို ခံရမှာပါ။ ကျွန်​​တော့်​ အ​နေနဲ့ ဒါ​တွေ အားလုံး ​တွေးဖို့ အတွက်​ စက္ကန့်​ဝက်​သာ အချိန်​ ရပါတယ်​ ။ ဒါ​ပေမယ့်​ ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ အမြင်​ က​တော့ ဒီ စွန့်​စားမှုဟာ တကယ့်​ကို ထိုက်​တန်​ ခဲ့ပါတယ်​။ ဒီ​ဗို့ကို ​အော်​​ပြော ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ကျွန်​​တော်​ ကန်​ပို့ရုံသာ လုပ်​ခဲ့ပြီး `ဘာ​တွေ ဖြစ်​လာမလဲ ကြည့်​ရတာ​ပေါ့´ လို့ပဲ ​တွေးခဲ့ပါတယ်​။” လို့ ထုတ်​​ဖော်​ လိုက်​ပါတယ်​။
ဆက်​လက်​ပြီး အလက်​ဇန်းဒါးအာနိုး က မန်​စီးတီး အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဆုဖလား​တွေ ဘယ်​လို ရယူ ရသလဲ ဆိုတာကို ဥပမာ ပြသခဲ့တယ်​လို့ ဆိုလိုက်​ပြီး ၎င်းတို့ အ​နေနဲ့ ဒီက​နေ ​လေ့လာသင်​ယူကာ ချန်​ပီယံလိဂ်​ဖလား အပြင်​ ​နောက်​ထပ်​ ဆုဖလား​တွေ ထပ်​မံရယူ သွားဖို့ ပစ်​မှတ်​ထား ​နေတယ်​လို့ ထုတ်​​ဖော်​ သွားပါတယ်။
လီ​ဗာပူး ညာ​နောက်​ခံလူက “ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက စီးတီးတို့ အမှတ်​​ပေးဖလားကို ဘယ်​လို ရယူ သွားခဲ့သလဲ ဆိုတာက​နေ ကျွန်​​တော်​တို့ ​လေ့လာ သင်​ယူစရာ​တွေ ရခဲ့ပါတယ်​။ ဖလားကို ဘယ်​လို ဆွတ်​ခူး ရသလဲဆိုတာ သူတို့ ပြသ သွားခဲ့ပါတယ်​။ ဖလားကို လက်​လွှတ်​ ခဲ့ရခြင်းဟာ ​ဘောလုံး ​လောကမှာ အဆိုးဝါးဆုံး ခံစားချက်​ပါ။ ဆုဖလားနဲ့ အနီးစပ်​ဆုံး ဖြစ်​ခဲ့တယ်​ ဆိုတဲ့ အ​ခြေအ​နေဟာ ကိုယ်​နဲ့ ကိုယ့်​ မိသားစု​တွေကို ဂုဏ်​ယူရတဲ့ ခံစားချက်​ ဖြစ်​​ပေါ် ​​စေပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ တစ်​ချိန်​တည်းမှာပဲ ကိုယ်​ဟာ အားလုံးကို စိတ်​ဓာတ်​ကျ ​စေခဲတယ်​ ၊ ကိုယ်​ဟာ လုံ​လောက်​​အောင်​ ​ကောင်းခဲ့ခြင်း မရှိဘူး ဆိုတဲ့ ခံစားချက်​လည်း ဖြစ်​ခဲ့ပါတယ်​။
ချန်​ပီယံလိဂ်​မှာ ​ဗိုလ်​စွဲပြီး​နောက်​ အခြား ဖလား တစ်​ခုတည်းကို အာရုံစိုက်​ ယှဉ်​ပြိုင်​ သွားရမယ်​လို့ ​ပြောလို့ မရပါဘူး။ နှစ်​ခုစလုံး ဘာ့​ကြောင့်​ မဖြစ်​နိုင်​ရမှာလဲ? ကျွန်​​တော်​တို့မှာ ဒီလို အရည်​အ​သွေး ပိုင်​​ဆိုင်​ ထားပါတယ်​။ ကျွန်​​တော်​တို့ ဖလားအားလုံး ရချင်​ပါတယ်​။ ကျွန်​​တော်​တို့ ဒါနဲ့ ပက်​သက်​ပြီး တစ်​ကိုယ်​​​ကောင်း ဆန်​ရမှာပါ။ ကျွန်​​တော်​တို့ အ​နေနဲ့ အခြား အသင်း​တွေကို ဖလား လွယ်​လွယ်​ကူကူ ဆွတ်​ခူးဖို့ အခွင့်​အ​ရေး ​ပေးသွားမှာ မဟုတ်​ပါဘူး။ ကျွန်​​တော်​တို့ ပြိုင်​ပွဲ အားလုံးကို လွှမ်းမိုးကာ ဖိုင်​နယ်​ ​ရောက်​​အောင်​ တက်​လှမ်း သွားချင်​ပါတယ်​။
ဘာစီလိုနာ နဲ့ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ဆီမီးဖိုငျ​နယျ​မှာ နာမညျ​​ကြျော​ ​ထောငျ့​ကနျ​​ဘော ​နောကျ​ကှယျ​က အမှတျ​တရားကို ​ပွောပွလိုကျ​တဲ့ အလကျ​ဇနျးဒါးအာနိုး
ထရနျ​အလကျ​ဇနျးဒါး အာနိုးက သူဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ဆီမီးဖိုငျ​နယျ​ ဒုတိယအ​ကြော့ ဘာစီလိုနာ နဲ့ ပှဲစဉျ​မှာ နညျးပွ ယာဂနျ​က​လော့ရဲ့ အမကျြ​​ဒေါသ နဲ့ ရငျ​ဆိုငျ​ ရမယျ့​ အ​ရေးကို စှနျ့​စားပွီး လီ​ဗာပူးကို ​နောကျ​တဆငျ့​ တကျ​​ရောကျ​ ​စမေယျ့​ ​ထောငျ့​ကနျ​​ဘောကို ကနျ​တငျ​ ခဲ့တာ ဖွဈ​တယျ​လို့ ထုတျ​​ဖျော​ သှားခဲ့ပါတယျ​။ လီ​ဗာပူး ဟာ ပထမအ​ကြော့က နူးကမျ့​မှာ ဘာစီလိုနာ အသငျးကို ၃ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးနိမျ့​ ခဲ့​ပမေယျ့​လညျး အနျ​ဖီးမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ဆီမီးဖိုငျ​နယျ​ ဒုတိယအ​ကြော့ ပှဲစဉျ​မှာ​တော့ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ သမိုငျးတဈ​​လြှောကျ​ အ​ကောငျးဆုံး Come back တဈ​ခုကို ပုံ​ဖျော​ နိုငျ​ခဲ့ကာ ဘာစီလိုနာ အသငျးကို ၄ ဂိုးပွတျ​နဲ့ ပွနျ​လညျ​ အနိုငျ​ယူကာ ​ဗိုလျ​လုပှဲကို တကျ​​ရောကျ​ ခဲ့ပါတယျ​။
လီ​ဗာပူးဟာ မကျ​ဒရဈ​မှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ဖိုငျ​နယျ​မှာ ​တော့တငျ​ဟမျ​ကို ၂-၀ နဲ့ အနိုငျ​ယူကာ ၆ ကွိမျ​​မွောကျ​ ဥ​ရောပ ခနျြ​ပီယံ ဖွဈ​ခဲ့ပါတယျ​။ ဒါ​ပမေယျ့​ အလကျ​ဇနျးဒါးအာနိုး ရဲ့ ဖွတျ​ထိုးဉာဏျ​နဲ့ ​ပေးပို့ခဲ့တဲ့ ​ထောငျ့ကနျ​​ဘော က​နေ တိုကျ​စဈ​မှုး ​ဒီ​​ဗျို​အိုရီဂီရဲ့ အဆုံးသတျ​ ခဲ့မှုဟာ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ဆီမီးဖိုငျ​နယျ​ရဲ့ အဆုံးအဖွတျ​ ဂိုး ဖွဈ​ခဲ့တဲ့ အပွငျ​ လီ​ဗာပူးရဲ့ ခနျြ​ပီယံ ခရီးလမျးမှာ အဓိက အ​ရေးပါတဲ့ အခိုကျ​အတနျ့​ဖွဈ​ခဲ့ပါတယျ​။
လီ​ဗာပူး တို့ ဘာစီလိုနာ ကို အနျ​ဖီးမှာ ၃-၀ နဲ့ ဦး​ဆောငျ​ ​နခြေိနျ​မှာ ​ထောငျ့​ကနျ​​ဘော ရရှိ ခဲ့ပွီး လီ​ဗာပူး ညာ​နောကျ​ခံလူဟာ အဆိုပါ ​ထောငျ့​ကနျ​​ဘောကို ဇာဒနျ​ရှကီရီ ကို ​ပေးကနျ​ဖို့ အတှကျ​ ​နောကျ​ကို ပွနျ​​လြှောကျ​လာဖို့ ပွငျ​ဆငျ​ ခဲ့ပါတယျ​။ ဒါ​ပမေယျ့​ ဘာစီလိုနာ ခံစဈ​​ကွောငျး သတိလကျ​လှတျ​ ဖွဈ​​နမှေုကို သတိပွု မိသှား ခဲ့တဲ့ အလကျ​ဇနျးဒါးအာနိုး ဟာ ​ထောငျ့​ကနျ​​ဘော ကို လြှငျ​လြှငျ​မွနျ​မွနျ​ ကနျ​ပို့ ခဲ့ပါတယျ​။
လူကပျ​ ကစားထားခွငျး မခံရတဲ့ အိုရီဂီ ဟာ အဆိုပါ ​ပေးပို့မှုကို အ​ကောငျးဆုံး အဆုံးသတျ​ကာ လီ​ဗာပူး အတှကျ​ ​လေးဂိုး​မွောကျ​ သှငျးဂိုးကို ရယူ ​ပေးခဲ့ပွီး လီ​ဗာပူး ကို ​ဗိုလျ​လုပှဲ ၂ ရာသီဆကျ​ တကျ​​ရောကျ​ ​စခေဲ့ပါတယျ​။ လကျ​ရှိမှာ​တော့ အင်ျဂလနျ​ ညာ​နောကျ​ခံလူ အလကျ​ဇနျးဒါးအာနိုး က သူ့ရဲ့ ​ထောငျ့​ကနျ​​ဘောဟာ အသငျးရဲ့ ​လကေ့ငျြ့​​ရေး ကှငျးမှာ သီးသနျ့​ ​လကေ့ငျြ့​ထားတာ မဟုတျ​ဘဲ အခိုကျ​အတနျ့​တဈ​ခု အ​ပျေါ ဉာဏျ​ကှနျ့​မွူး သှားခဲ့တာ ဖွဈ​တယျ​လို့ ဆိုသှား ပါတယျ​။
ဒါ​ပမေယျ့​ အလကျ​ဇနျးဒါးအာနိုး က ဒီ ​ထောငျ့​ကနျ​​ဘော သာ အလုပျ​ မဖွဈ​ ခဲ့ဘူးဆိုရငျ​ နညျးပွ ယာဂနျ​က​လော့ရဲ့ ​ဒေါသတကွီး ​ပွောဆိုမှုကို ခံရမှာ ဖွဈ​တယျ​လို့ ဝနျ​ခံ သှားပါတယျ။
လီ​ဗာပူး ညာ​နောကျ​ခံလူ က “ကြှနျ​​တျော့​တို့ ဒါကို ​လကေ့ငျြ့​​ရေးကှငျးမှာ ​လကေ့ငျြ့​မှု လုပျ​ထားတာ မဟုတျ​ပါဘူး။ ဒါဟာ အလိုအ​လြောကျ​ တုနျ့​ပွနျ​မှု ဖွဈ​ပွီး ကြှနျ​​တျော​ အခှငျ့​အ​ရေးကို ​တှလေို့ကျ​ ခြိနျ​မှာ အသုံးခြ ခဲ့ရုံ ပါပဲ။ လူ​တှေ ​နောကျ​ပွနျ​လှညျ့​ သှားတာကို ကြှနျ​​တျော​ မွငျ​​တှေ့ ခဲ့ရပါတယျ​။ ဂိုးသမား ကလညျး တဈ​စုံတဈ​ဦး ကို ညှနျ​ကွားခကျြ​​တှေ ​ပေး​နေ တာကို ကြှနျ​​တျော​ မွငျ​​တှေ့ ခဲ့ပါတယျ​။ ပွီး​တော့ ဘာစီလိုနာ ကစားသမား တဈ​ဦးမှ ​ဘောလုံးဘကျ​ကို ကွညျ့​​နတော ကြှနျ​​တျော​ မ​တှေ့ ခဲ့ပါဘူး။
ဒီ​ဗို့အိုရီဂီ ကို ကြှနျ​​တျော​ အလယျ​မှာ ​​တှခေဲ့ ပါတယျ​။ သူတို့ရဲ့ ပငျ​နယျ​တီ ဧရိယာ အလယျ​ထဲမှာ အကြီနီ ဝတျ​ထားတဲ့သူ တဈ​ဦးကို ကြှနျ​​တျော​ မွငျ​ခဲ့ပွီး ဘာ့​ကွောငျ့​ မဖွဈ​ နိုငျ​ရ မှာလဲ? ဆိုပွီး ကြှနျ​​တျော​ ​တှေးခဲ့ ပါတယျ​ ။ အကယျ​၍ ဒီ​ထောငျ့​ကနျ​​ဘောသာ အလုပျ​ မဖွဈ​ ခဲ့ဘူး ဆိုရငျ​ ကြှနျ​​တျော့​ အ​နနေဲ့ ပှဲအပွီးမှာ ယာဂနျ​က​လော့ ​အျော​တာကို ခံရမှာပါ။ ကြှနျ​​တျော့​ အ​နနေဲ့ ဒါ​တှေ အားလုံး ​တှေးဖို့ အတှကျ​ စက်ကနျ့​ဝကျ​သာ အခြိနျ​ ရပါတယျ​ ။ ဒါ​ပမေယျ့​ ကြှနျ​​တျော့​ရဲ့ အမွငျ​ က​တော့ ဒီ စှနျ့​စားမှုဟာ တကယျ့​ကို ထိုကျ​တနျ​ ခဲ့ပါတယျ​။ ဒီ​ဗို့ကို ​အျော​​ပွော ခဲ့ခွငျး မရှိပါဘူး။ ကြှနျ​​တျော​ ကနျ​ပို့ရုံသာ လုပျ​ခဲ့ပွီး `ဘာ​တှေ ဖွဈ​လာမလဲ ကွညျ့​ရတာ​ပေါ့´ လို့ပဲ ​တှေးခဲ့ပါတယျ​။” လို့ ထုတျ​​ဖျော​ လိုကျ​ပါတယျ​။
ဆကျ​လကျ​ပွီး အလကျ​ဇနျးဒါးအာနိုး က မနျ​စီးတီး အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဆုဖလား​တှေ ဘယျ​လို ရယူ ရသလဲ ဆိုတာကို ဥပမာ ပွသခဲ့တယျ​လို့ ဆိုလိုကျ​ပွီး ၎င်းငျးတို့ အ​နနေဲ့ ဒီက​နေ ​လလေ့ာသငျ​ယူကာ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ဖလား အပွငျ​ ​နောကျ​ထပျ​ ဆုဖလား​တှေ ထပျ​မံရယူ သှားဖို့ ပဈ​မှတျ​ထား ​နတေယျ​လို့ ထုတျ​​ဖျော​ သှားပါတယျ။
လီ​ဗာပူး ညာ​နောကျ​ခံလူက “ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက စီးတီးတို့ အမှတျ​​ပေးဖလားကို ဘယျ​လို ရယူ သှားခဲ့သလဲ ဆိုတာက​နေ ကြှနျ​​တျော​တို့ ​လလေ့ာ သငျ​ယူစရာ​တှေ ရခဲ့ပါတယျ​။ ဖလားကို ဘယျ​လို ဆှတျ​ခူး ရသလဲဆိုတာ သူတို့ ပွသ သှားခဲ့ပါတယျ​။ ဖလားကို လကျ​လှတျ​ ခဲ့ရခွငျးဟာ ​ဘောလုံး ​လောကမှာ အဆိုးဝါးဆုံး ခံစားခကျြ​ပါ။ ဆုဖလားနဲ့ အနီးစပျ​ဆုံး ဖွဈ​ခဲ့တယျ​ ဆိုတဲ့ အ​ခွအေ​နဟော ကိုယျ​နဲ့ ကိုယျ့​ မိသားစု​တှကေို ဂုဏျ​ယူရတဲ့ ခံစားခကျြ​ ဖွဈ​​ပျေါ ​​စပေါတယျ​။ ဒါ​ပမေယျ့​ တဈ​ခြိနျ​တညျးမှာပဲ ကိုယျ​ဟာ အားလုံးကို စိတျ​ဓာတျ​ကြ ​စခေဲတယျ​ ၊ ကိုယျ​ဟာ လုံ​လောကျ​​အောငျ​ ​ကောငျးခဲ့ခွငျး မရှိဘူး ဆိုတဲ့ ခံစားခကျြ​လညျး ဖွဈ​ခဲ့ပါတယျ​။
ခနျြ​ပီယံလိဂျ​မှာ ​ဗိုလျ​စှဲပွီး​နောကျ​ အခွား ဖလား တဈ​ခုတညျးကို အာရုံစိုကျ​ ယှဉျ​ပွိုငျ​ သှားရမယျ​လို့ ​ပွောလို့ မရပါဘူး။ နှဈ​ခုစလုံး ဘာ့​ကွောငျ့​ မဖွဈ​နိုငျ​ရမှာလဲ? ကြှနျ​​တျော​တို့မှာ ဒီလို အရညျ​အ​သှေး ပိုငျ​​ဆိုငျ​ ထားပါတယျ​။ ကြှနျ​​တျော​တို့ ဖလားအားလုံး ရခငျြ​ပါတယျ​။ ကြှနျ​​တျော​တို့ ဒါနဲ့ ပကျ​သကျ​ပွီး တဈ​ကိုယျ​​​ကောငျး ဆနျ​ရမှာပါ။ ကြှနျ​​တျော​တို့ အ​နနေဲ့ အခွား အသငျး​တှကေို ဖလား လှယျ​လှယျ​ကူကူ ဆှတျ​ခူးဖို့ အခှငျ့​အ​ရေး ​ပေးသှားမှာ မဟုတျ​ပါဘူး။ ကြှနျ​​တျော​တို့ ပွိုငျ​ပှဲ အားလုံးကို လှမျးမိုးကာ ဖိုငျ​နယျ​ ​ရောကျ​​အောငျ​ တကျ​လှမျး သှားခငျြ​ပါတယျ​။